DR KC – Rajdhani Daily
Tags: DR KC
डा. केसीद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार
सुभाष साह/काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान एवं सुधारका लागि गरेको प्रस्ताव डा. गोविन्द केसीले अस्वीकार गरेका छन् । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रक...
डा. केसी दुःखी
काठमाडौं/रास– डा. गोविन्द केसीले लामो समयदेखि बिरामीको उपचार गर्न नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर बिरामीको उपचारमा संलग्न हुन ...
चिकित्सा विधेयकमा सत्तापक्षकै २२ बुँदे संशोधन
राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिका विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न सत्तारूढ नेकपाले संशोधन दर्ता गराएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सचेतक शा...
केसीको मागमा अपर्याप्त रोडम्याप : रायमाझी
राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागहरु ठीक भएपनि समग्र मेडिकल...
बिथोलियो सरकार–केसी वार्ता, विधेयकमै अड्कियो फेरि गाँठो
टेनिस रोका/काठमाडौं। सरकार र सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता बुधबार बिथोलिएको छ । सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको वार्तामा केसीका सात बुँदे मागमध्ये ६ बुँदामा...
डा. केसीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्नुहोस्
राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्न खुला प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ...
केसीको रगतमा ‘प्यारामिटर’ असामान्,ग्लुकोजको मात्रा अत्यन्तै कम,पोटासियमको मात्रामा सुधार भएन,कुनै पनि बेला मुटु बन्द हुन सक्ने
विनोद ढकाल/काठमाडौं। सत्याग्रहको २३औं दिन ८० वर्षीया आमा मित्रकुमारी केसी छोरा डा. गोविन्द केसीको अनुहार हेर्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् । आमासँग आँखाको इसाराले भावुक संवाद भयो उनको । मित्रकुमारीले केसीका...
केसीका मागमा १४ सम्पादकको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं/रास– चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका मागमा १४ जना सम्पादकले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आइतबार केसी अनशनस्थल पुगेर उनीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउ...
डा. केसीलाई बलपूर्वक शिक्षण अस्पताल ल्याइयो
राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं । सरकारले बिहीबार डा. गोविन्द केसीलाई बलपूर्वक जुम्लाबाट काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज ल्याएको छ । उसले केसीको जीवनरक्षाका लागि अस्पताल ल्याएक...
डा. केसीको मुटुमा समस्या, नसामा संक्रमण
राजधानी संवाददाता/जुम्ला। १९ दिनदेखि सत्याग्रह आन्दोलनमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको मुटुमा गम्भीर समस्या देखा परेको छ ।मंगलबार राति र बिहान ...
उत्कृष्ट बाहिनी अवार्ड डीआईजी अर्याललाई, खाम्चा वर्ष… (6,658)
यस्तो छ सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कल्याणकारी प्याकेज (3,199)
सशस्त्रमा पाँच जना डीआईजीमा सिफारिस, केबी… (2,946)
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलले गरे सशस्त्र… (2,600)